काठमाडौँ उपत्यकामा धुँवा धुलोको आतंक, बिरामी पर्नेको संख्या बढ्यो ! | newdnn.com
काठमाडौँ उपत्यकामा धुँवा धुलोको आतंक, बिरामी पर्नेको संख्या बढ्यो !
२२,शनिबार ०३:१६ Sangita Rai
भक्तपुर, २२ पुस । दुई वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने भक्तपुर–नगरकोट सडक निर्माण शुरु भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न नभएपछि स्थानीय बासिन्दादेखि पर्यटकसमेतले सास्ती भोग्ने गरेका छन् ।
कमलविनायकदेखि भत्केकोपाटी हुँदै नगरकोट खण्डको १६ किमी मुख्य सडक विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । विसं २०७१ जेठमा निर्माण शुरु भएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिले आव ०७२÷०७३ मै निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने सम्झौता गरे पनि हालसम्म सडक विस्तारले गति लिन सकेको छैन ।
एक्जिम बैंक इन्डियाको रु २८ करोडको सहयोगमा सडक विस्तार शुरु गरेको थियो । विसं २०७४ मंसिरसम्ममा आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने भन्दै निर्माण अवधि थप गरिए पनि थप समयसमेत सकिएर बल्ल ४० प्रतिशत काम मात्र पूरा भएको छ ।
सोह्र किमी सडकखण्डमा ग्राभेलिङ गर्ने र कालोपत्र गर्ने काम पूरै बाँकी छ । अबको पाँच महिनामा सबै काम सम्पन्न गरिसक्ने शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिका इ विजय प्रजापतिले जिकिर गरे ।
पर्यटन व्यवसायी धरापमा
पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटको सडक विस्तारमा भएको ढिलाइका कारण पर्यटन व्यवसायसमेत धरापमा परेको छ । सडक खनेर जथाभावी छाड्दा साँघुरो र धुलाम्मे भएको पर्यटन व्यवसायी गोकुल लामिछानेले बताए ।
“काठमाडौँबाट नगरकोट आउनुअघि नै पर्यटक तथा ट्राभल एजेन्सीले सडकका बारेमा सोध्ने गरेका छन्, सडक निर्माण सम्पन्न भएको छैन भन्ने जानकारी पाएपछि कतिपय पर्यटकले नगरकोट आउने कार्यक्रम नै रद्द गर्ने गरेका छन्”, उनले बताए ।
अर्का व्यवसायी बद्री माकले विगत वर्षभन्दा यस वर्ष सडक अति जीर्ण हुँदा र निर्माण पूरा नहुँदा ५० प्रतिशत पर्यटक घटेको बताए । पर्यटन व्यवसायीले निर्माण कम्पनीलाई छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न ताकेता गर्दा उल्टो धम्की आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
घर घरमा बिरामी
सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीले सास्ती मात्रै व्यहोरेका छैनन्, घरघरमा बिरामी पर्न थालेका छन् । सडक निर्माणका क्रममा निस्कने धुलोका कारण यहाँको जनजीवनसमेत कष्टकर बनेको स्थानीय सञ्चारकर्मी सोम शर्मा बजगाईंले जानकारी दिए ।
उनले भने, “सडक निर्माणमा भएको ढिलाइ र लापर्वाहीले घरघरमा मानिस बिरामी पर्न थालेका छन्, अत्यधिक धुलो उड्ने गर्दा घरबाट निस्किएको मानिस भक्तपुर पुग्दा चिन्नै नसक्ने हुन्छन्, धुलोकै कारण दिनानुदिन गाउँमा बिरामीको चाप बढ्दैछ ।”
सडक निर्माणका क्रममा निस्केको धुलोका कारण बालबालिका र वृद्धवृद्धामा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग लाग्न थालेको छन् ।